'Hokapohiko ny f ** k ianao': nandrahona mpankafy 16 taona i Bryce Hall noho ny fanakaikezany azy - Pop-Kolontsaina
'Hokapohiko ny f ** k ianao': nandrahona mpankafy 16 taona i Bryce Hall noho ny fanakaikezany azy
Nipoitra an-tserasera tato ho ato ny horonantsary TikTok iray an'i Bryce Hall nandrahona mpankafy iray misy herisetra ara-batana sy hetsika ara-dalàna.
21 taona i Bryce Hall, olona manana Internet, dia TikToker izay nilaza ho malaza tamin'ny alàlan'ny maha mpikambana ao amin'ny Sway LA, iray amin'ireo trano famoronana votoaty TikTok voalohany tany Los Angeles. Fantatra ihany koa izy tamin'ny fanandramana nanomboka asa tamin'ny ady totohondry, na dia tsy nahomby aza izy ary nilavo lefona.
Mandrahona zaza tsy ampy taona imasom-bahoaka i Bryce Hall
Ny Alatsinainy maraina dia nisy horonantsary TikTok avy amin'ny kaonty iray antsoina hoe 'CelebCringe'.
Mahatsiaro ho 'norahonana' tamina mpankafy tanora iray i Bryce Hall, ho setrin'izany dia mandrahona azy hiverina (Sary avy amin'ny TikTok)
Ilay horonan-tsary maharitra iray minitra dia nanasongadina an'i Bryce Hall ara-batana sy ara-dalàna nandrahona tovovavy iray mpankafy azy izay 'nihantsy' azy tamim-piesonana tamin'ny lalao iray. Toa tezitra tamin'ilay zaza tsy ampy taona i Bryce, raha nipetraka teo ampitan'ny latabatra kosa ny sakaizany izay naka sary ny toe-javatra.
Nilaza i Bryce fa natahoran'ilay zazalahy 16 taona nijoro teo akaiky teo izy, nilaza taminy fa halefany any amin'ny mpisolovava azy ilay horonantsary. Hoy izy:
'Raha miverina eto ianao, miaraka amin'ny COVID fa zavatra iray ary mahatsapa ho voarahona aho, ary fandrahonana izany, [dia] halefako any amin'ny mpisolovava ahy izany.'
Avy eo dia nandrahona tamin-kerisetra ilay zazalahy ara-batana izy, ary nilaza fa 'handondona [azy] ny f ** k' hiaro tena. Ilay zazalahy tao amin'ilay horonantsary dia hita nijoro teny lavitra teny.
'Raha sendra tafavoaka an'io tsipika io ianao, enina metatra, hataoko mandroaka anao ny f ** k. Fiarovan-tena. '
Ilay zazalahy 16 taona tsy fantatra anarana dia namaly an'i Bryce avy eo ary nanontany azy ny antony mahatezitra azy. Hoy izy:
'Tsy haiko hoe maninona ianao no tezitra be. 16 taona aho. Fa maninona ianao no tezitra? '
Avy hatrany dia niaro tena tamin'io zaza tsy ampy taona io i Bryce, ary niampanga azy ho nanao herisetra sy te hahaliana azy. Nasainy nandeha izy avy eo.
'Nandalo ianao, nanenjika ahy ianao tamin'ny fotoana rehetra nanandrana f ** king hihinana. Hoy ianao [amin'ny] boaty anao. Mpankafy tezitra ianao satria tsy omeko anao ny sainao. Mialà amin'ny faritry ny f ** mpanjaka. '
Rehefa lasa ilay zazalahy dia namerimberina hatrany ny 'fivoahana ny faritry ny f ** mpanjaka' i Bryce, ary nanosika ilay voalohany hilaza fa i Bryce no nilaza taminy hanatona azy voalohany.
'Handeha aho fa ianao no nilaza tamiko hanatona anao.'
Bryce Hall dia mbola tsy mbola namaly na nifona noho ny fampiasany ny fiteny tamin'ilay mpankafy tanora izay tanora dimy taona noho izy, ary angamba te hiresaka fotsiny.
Vakio ihany koa: Viner Hayes Grier teo aloha voasambotra noho ny resaka fanendahana tany North Carolina, namela ny Twitter ho voarara
vola amin'ny lalao banky 2018
zavatra hafahafa hatao rehefa mankaleo
mianatra mamela ny lasa
zavatra mahafatifaty hatao amin'ny fitsingerenan'ny taonan'ny sakaiza